Xildhibaanada Soomaaliya oo isku dayaya inay mooshin ka geeyaan Madaxweynaha
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee Reuters Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qorsheynaya inay mooshin xilka looga tuuray ka geeyaan Madaxweyne Farmaajo, iyadoo ay sii kordheyso qalqalka siyaasadeed ee ka jira dalka.
Sagal Radio Services • News Report • December 10, 2017
Madaxweynaha oo ku baaqay in gargaar deg-deg lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen
Sagal Radio Services • News Report • March 20, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, hay’adaha gargaarka iyo beesha caalamka inay kaalmo deg-deg ah la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen.
Madaxweynaha oo ka qeyb galaya shir madaxeedka 4aad ee Carabta iyo Latin America
Madaxweynaha xalay oo afur u sameeyay danjirayaasha dalalka Islaamka ee Muqdisho ku sugan (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay aqalka Madaxtooyada ee magaalada Muqdisho afur ugu sameeyay danjirayaasha dalalka Islaamka ee ku sugan dalka.
Madaxweynaha Yemen Hadi oo shuruud adag ku xirey ka qeybgalka shirka Geneva
Madaxweynaha dalka Yemen Mansour Hadi ayaa ku xirey shuruud ka qeybgalka shirka ay Qaramada Midoobay ku baaqeen in uu ka dhaco magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo ah oo ku aaddan guusha Xisbiga Conservative uu ka soo hoyay doorashada Britain u diray Ra’iisul Wasaaraha dalkaasi Mr David Cameron.
Madaxweynaha “Ma jiri doonto wax waqti kordhin ah, 2016 doorasho ayaa dhaceysa”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe ee shalay wariyeyaasha kula hadlayay Xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasada iyo qorshaha hiigsiga sanadka 2016 oo la rajeynayo in Soomaaliya doorasho ka dhacdo.
Madaxweyne Xasan “Ururka Daacish waa dambiilayaal ka soo horjeeda ilbaxnimada”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay falkii Ururka Daacish ee dalka Libiya ku dileen in ka badan 20 qof oo Masiixiyiin ah oo u dhashey Ethiopia bishan April 19-keeda.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn u Bogaadiyay Geesinimada ay muujiyeen Ciidamada Amniga Soomaaliya
War Saxaafadeed: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa cambaareeyay weerarka ay kooxda Al-Shabaab shalay ku qaadday dhisme ay leedahay Wasaaradda Waxbarashadu.
XASAN SHEEKH: Shacabka gobolada dhexe waa inay xoojiyaan dib u Heshiisiinta iyo Nabadda
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminyo ayaa dib ugu soo laabtey Muqdisho, kaddib marki ay booqasho laba maalmood ah ku tageen xarunta gobolka Galguduud ee Dhuuso-mareeb.
Madaxweyne Xasan oo Midowga Afrika u sheegay in Soomaaliya ay ka go’an tahay xaqiijinta Hiigsiga 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabbiley Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maman Sidikou.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay go’aanka ay ku taageereen duqeymaha Yemen
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay mowqifka dowladdiisa ee ay ku taageereen duqeymaha ka dhanka ah Jabhadda Xuutiyiinta ee isku dayaya inay qabsadaan dalka Yemen oo dhan.
Madaxweynaha oo ku baaqay in loo diyaar garoobo dhismaha Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in loo diyaar garoobo sidii looga qeyb qaadan lahaa maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo hadal heyntiisu aheyd mid aad u sii xoogeysaneysay tan iyo sanadkii hore.
Madaxweynaha Somalia oo baaris caafimaad kaddib kusoo laabtay Muqdisho
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud oo dalka dibaddiisa ugu ambabaxay toddobaadkii lasoo dhaafay arrimo caafimaad ayaa dib ugu soo laabtay saaka Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta lagu wado in baaris caafimaad u aado dalka Jarmalka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaco ah u kicitimo dalka Jarmalka ,halkaasoo Madaxweynuhu arrimo caafimaad u tagi doono.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta lagu wado inuu tago magaalada Dhuusa Mareeb
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago magaalada Dhuusa Mareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud, halkaasoo ay ka socoto qaban qaabo lagu soo dhoweynayo.
Madaxweynaha “Wada tashiyada looga arinsanayo mustaqbalka dalka cid kasta ayaa ka qeyb geli doonto”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la ballaarinayo wada tashiyada mustaqbalka dalka looga arinsanayo, isagoo xusay in aragtida dowladda dhexe ay tahay in dhamaan Soomaalida oo dhan ka wada qeyb qaataan wada tashiyada socda,
Madaxweynaha Soomaaliya oo u ambabaxay Sacuudiga, si uu uga qeyb galo aaska Boqor Cabdalla
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ka qaaday diyaarad gaar ah, iyadoo Madaxweynuhu ka qeyb geli doono Aaska Boqorka dalka Sacuudiga Boqor Cabdalla bin C/casiis oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaal magaalada Riyadh.
Madaxweyne Xasan Sheekh: “Xalka mashaakilaadka dalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay shacabka Soomaaliyeed.”
Sagal Radio Services • News Report • January 11, 2015
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya ayaa loogaga hadlay shirka maalinlaha ahaa ee ay wasiirada arrimaha dibada wadamada IGAD ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud oo wadahadallo kula yeeshay dalka Jabuuti madaxweynaha Somaliland, Axmed Siilaanyo ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabto in 2015-ka horumar wanaagsan laga gaaro wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland.
M/weyne Xasan Sheikh oo ka qeyb galay Xalay Kulan Amaanka looga hadlayay
Madaxweynaha oo la filayo in saacadaha soo socda uu Ra’iisul Wasaare u magacaabo Cumar Cabdirashiid
Waxaa soo xoogeysanaya hadal heynta ku aadan in Madaxweynuhu uu saacadaha soo socda qorsheynayo inuu magacaabo Ra’iisul Wasaare, waxaana ay u badan tahay in loo magacaabi doono Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke oo horay Ra’iisul Wasaare u soo noqday sanadkii 2009-kii.
Madaxweynaha oo xalay la kulmay Xildhibaanadii ka soo horjeeday mooshinkii lagu riday C/wali
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay xarunta Madaxtooyada kula kulmay Xildhibaanadii ka soo horjeeday mooshinkii lagu riday Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed, kaasoo Sabtidii la soo dhaafay uu Baarlamaanka kalsoonida kala laabtay.
Madaxweynaha oo bilaabay wada tashiyada uu ku doonayo inuu Ra’iisul Wasaare cusub ku soo magacaabo
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay wada tashiyo cusub uu ku doonayo inuu Ra’iisul Wasaare ku soo magacaabo maalmaha soo socda, iyadoo la dhowrayo in Madaxweynuhu ku dhawaaqo Ra’iisul Wasaarihii bedeli lahaa C/wali Sheekh Axmed dhamaadka todobaadkan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka qeyb galaya caleema-saarka Shariif Xasan
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafuud kale ayaa maanta ka qeyb geli doonta caleema saarka Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyadoo ammaanka magaalada Baydhabo si aad ah loo adkeeyay.
Madaxweynaha oo ka hadlay baahida loo qabo isku dhafka ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka
Standardmedia • News Report • November 30, 2014
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isku dhafka ciidanka gobollada iyo kuwa Qaranka ay qeyb ka qaadaneyso dhisidda awoodda ciidanka iyo horumarinta federaalka dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Kuxigeenka Gudoomiyaha Midowga Afrika ee dhinaca, Haweenka, Amniga iyo Xasilinta Haweeneyda lagu magacaabo Mrs Bineta Diop oo maanta soo gaartay mgalaada Muqdisho.
Madaxweynaha oo xalay kulamo gaar gaar ah la yeeshay Xildhibaanada Baarlamaanka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulamo gaar gaar ah la qaatay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, iyadoo kulamadan looga hadlay khilaafka iyo is mariga waaga siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda dowladda, kaasoo saameeyay hey’adaha ugu sareeya dowladda.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Dalka ku soo laabtay
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay, iyadoo si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Xukuumada Soomaaliya shaqadii loo dhiibay ay socon weyday, isagoo ugu baaqay Baarlamaanka inuu keeno Xukuumad shaqeyneyso.
Madaxweynaha Somalia oo soo dhaweeyay Dhismaha Maamulka Koonfur Galbeed
Madaxwaynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalaya shirka Copenhagen ee loo qabanayo Somalia ayaa soo dhaweeyay doora-shada madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliya oo loo doortay xildhibaan Shariif Xasan Sh. Aadan iyo dhismaha maamulkaas.
War Deg Deg Ah Madaxweyne Xasan Sheekh Goordhaw ka dhoofay Muqdisho iyo R/Wasaaraha oo sii sagootiyay
Warar kusoo dhacay Warqabadka Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegaya in goordhaw Garoonka Diyaaradaha Aadan cadde ka dhoofeen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud iyo Xubno la socda.
Madaxda Dowladda Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay Wafdi uu Hoggaaminayo Ban Ki-Moon (SAWIRRO)
Madaxda Somalia, sida madaxweyne Xasan Sheekh, ra’iisul wasaare C/weli Sh. Axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Cismaan (Jawaari) ayaa maanta si wadajir ah kulan ula yeeshay xoghayaha guud ee QM, Ban Ki-Moon iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo booqasho saacado qaadatay ku yimid Muqdisho.
Madaxweynaha DFS oo ka horyimid Go’aankii Ra’iisul Wasaaraha ee Isku shaandheynta
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo maanta ka dhoofay Magaalada Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay Garoonka Diyaaradaha Aaan Cadde ee Magaalada Muqdisho , waxa uuna Madaxweynaha u dhoofay Dalka Mareykanka.
M/weynaha Soomaaliya oo Beesha Caalamka baaq u diray
Xasan Sheikh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Beesha Caalamka ka dalbaday in Dowladda Federaalka Soomaaliya Caalamka uu siiyo Taageero Fiican si Dowladdiisa ay ugaarto Hormar Buuxa oo ay kamid yihiin Amaanka iyo Dhaqaalaha Dalka oo dib u soo laabta.
Madaxweynaha oo kormeeray Terminal weyn oo laga hirgelinayo garoonka diyaaradaha Muqdisho (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagey dhismaha ka socda garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan oo laga hirgelinayo Terminal weyn oo ka kooban qeybo kasta oo garoon uu leeyahay, islamarkaana loo dhisayo si casri ah oo uusan garoonka Muqdisho horay u laheyn.
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxnimo ee Soomaaliya marka la gaaro 2016-ka.
M/weyne Xasan Sheikh”AMISOM Jawaab Deg Deg ah haka bixiso Kufsiga Haweenka Soomaaliyeed”
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo Xalay Su’aalo la Xariira Waxqabadkiisii Mudada uu Xilka hayay laga weydiinayay ayaa sheegay in AMISOM laga dalbaday in ay Jawaab Deg Deg ah ka bixiyaan hadal sheegayay in Dumar Soomaaliyeed ay Kufsadeen.
Madaxda Dalka oo Shacabka ugu laab qaboojiyay Geerida Axmed Godane
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare C/wali Sheikh Axmed oo Warbaahinta la hadlay ayaa Shacabka Soomaaliyeed u sheegay in uu Geeriyooday Hogaamiyihii Al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo 1-dii Bishaan lagu dilay Weerar Diyaaradaha Mareykanka ay ka geeysteen Gobolka Shabellaha Hoose.
Madaxweynaha Soomaliya, Xasan Shiikh Maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay shalay wafdi uu hoggaaminayo ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan nabadgalyada iyo ammaanka caalamka, Peter Drennan.
Madaxweyne Xasan oo sheegay inay guulo kasoo hoyeen Shirkii Washington
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay guulo kasoo hoyeen shirkii Afrika iyo Mareykanka dhexmaray ee lagu qabtay Washington.
Xasan Sheikh”waxaan Diyaarinay wajigii Labaad ee Dagaalka Al-Shabaab”
Madaxweynaha Somalia Hassan Sheikh Mohamud oo lahadlaye Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa sheegay iney Dowladiisu ay qorsheeneeso duulaan Cusub ay ku qaadaan kooxda shabab islamarkaana somalia howlgalkaas looga saaro.
Madaxweynaha: Qabyaaladda waa caqabadda wax qabadka dowladda
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u dhac ku yimid Soomaaliya uu salka ku hayo qabyaadda iyo waxyaabo aan u habbooneyn mustaqbalka Soomaaliya.
Madaxda Qaranka Oo Kumannaan Dadweyne Ah Salaada Ciidda Kula Tukatay Masjidka Isbaheysiga (Dhageyso)
Sagal Radio Services • Audio/News Report • July 28, 2014
Madaxda Qaranka oo uu ugu horreeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, Ra’iisul wasaaraha, xubnaha G/wasiirrada, mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa kummanaan dadweyne ah, salaadda ciidda kula tukaday Masjidka Isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa munaasabadda Ciidda hambalyo u diray Shacabka Soomaaliyeed:-War-Saxaafadeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u direy hambalyada ciidul fitriga oo maanta loo dabaaldegayo.
Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay dilkii Xildhibaanad Saado Cali
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga tacsiyeeyey qoyska, ehelada, qarabada, xildhibaanada baarlmaanka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geerida Marxuumad Xildhibaan Saado Cali Warsame oo maanta Muqdisho lagu dilay.
Madaxweynaha oo QM u gudbiyey Qoraal ka hor imanaya Xeerkii Badda Soomaaliya ee Law no. 37
Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay Weerarkii Al-shabaab ee Madaxtooyada
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa ka hadlay weerarkii Al-shabaab ay ku qaadday fiidkii caawa xarunta madaxtooyada Soomaaliya, isagoo sheegay in madaxtooyadu ay tahay ammaan, isaguna uu bad-qabo.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo umadda Soomaaliyeed ugu hambalyeyey dhalashada bisha Ramadaan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan umadda Soomaaliyeed ugu hambalyeyey dhalashada bisha barakeysan ee Ramadan.
Madaxweynaha oo sheegay in dowladda ay diyaarisay barnaamij loogu magac daray nabad ku afur
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaarisay barnaamij loogu magac dara Nabad ku afur, kaasoo uu tilmaamay inuu yahay barnaamij amni.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo ku aaddan sannad-guuradii 37-aad ee xorriyadda dalka Jabuuti wuxuu u diray shacabka iyo dowladda Jabuuti.
Xasan Sheikh”Dagaalada ka dhacaya Dalka waa kuwo lagu Taageerayo Al-shabaab
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo dhowr jeer ka hadlay Dagaalada ku soo laab laabtay Gobolada Dalka Qaarlood ee Salka ku haya Dhinaca Qabaa’ilka ayaa markaan waxaa uu oga hadlay si kulul,asagoona sheegay in dagaaladaasi Dowladdu ay u aragto kuwo lagu Taageerayo Al-shabaab oo Dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul u dhaliilay hab dhaqanka Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay Khudbad dheer ka horjeediyay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa usoo jeediyay dhaliil la xariirta in Baarlamaanku uusan u shaqeyn sidii la rabay.
Daawo Sawirada Madaxweynaha iyo Ra;iisul Wasaaraha oo saaran Markab dagaal Turkiga leeyahay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed, Wasiiro ka tirsan Xukuumada, Taliyeyaasha ciidamada ayaa Markab dushiis oo ku soo xirtay Dekeda Muqdisho kula kulmay Taliyaha Ciidamada Badda Turkiga iyo Saraakiil.
Soomaaliya oo soo dhoweysay magacaabista la filayo ee safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka, Barrack Obama uu ku doonayo inuu dhowaan ku magacaabo safiirka dalkiisa u qaabilsanaan doona Soomaaliya.
XASAN SHIIKH: oo ka dalbaday laamaha Amaanka in ay kalsooni ka kasbadaan (Sawiro)
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xiray tababar socday muddo seddex toddobaad ah oo wasaarada arrimaha gudaha iyo federaalka ay soo qabanqaabisay laguna qabtay dugsiga tababarka booliiska Muqdisho ayaa ka dalbaday mas’uuliyiintii tababarkaas loosoo xiray inay kalsooni geliyaan shacabka ay maamulayaan.
Madaxweyne Xasan oo ka hadlay Is casilaadii Wasiirkii Amniga Cabdi kariin Guuleed
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah Ee Somalia Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo maanta Magaalada Muqdisho Dib ugu soo laabtay ayaa markii uu soo laabtay Waxaa uu ka hadlay Arimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Weerarkii Shalay al shabaab ku qaadeen Xarunta Golaha shacabka Muqdisho iyo is Casilaada Wasiirkii Amniga Qaranka cabdi kariin Xuseen Guuleed oo Xalay Xilka iskaga Dagay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo mar Labaad Kormeer ku sameeyay Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay mar kale kormeer ku sameeyay Muqdisho, isagoo tagay hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, halkaaso uu kula kulmay mas’uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad shacab ah oo u badan qurbo-joog ka yimid dalka dibaddiisa.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka duwan yihiin ciidamada AMISOM ee dalka ku sugan, isagoo xusay in ciidamadan ay joogayaan dalka muddo kooban.
MADAXWEYNAHA OO XALAY BOOQDAY SALDHIGYO BOOLIIS OO MUQDISHO KU YAALA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday Saldhigyo Booliis oo ku yaala Degmooyin ka tirsan Gobalka Banaadir.
Xasan Sheekh oo ka hadlay Wararka Sheegaya in Dowlada Imaaraadka lacag ku siisay Xildhibaanada in ay isaga ridaan
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeesay soo hadal qaaday Warar maalmahan soo baxayay oo sheegayay in Dowlada Imaaraadka carabta ay ku hoolantahay in Madaxweynaha xilka ay ka tuuraan Xildhibaanada Baarlamaanka.
Madaxweynaha Somalia oo ku Wajahan Magaalada Kampala ee Dalka Uganda - See more at: http://www.hiiraan.com/news/2014/May/wararka_maanta11-46520.htm#sthash.1mNgoG3y.dpuf
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusii jeeda Kampala, halkaasoo uu kula kulmo doono madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, si ay uga wada tashadaan xaaladaha Soomaaliya, maadaama ay askar badan kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay lacagihii Calaamku ugu deeqay Somalia
Madaxweyanaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in deeqihii lacageed ee beesha calaamku ay ugu yaboohday Somalia aysan weli soo gaarin, balse ay filayaan in dhawaan la billaabo maareynta lacataas, kaddib markii iyaga iyo beesha caalamka ay iskua af-garteen habka lacagahaas loo bixinayo.
War Deg Deg Ah Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta looga yeeray Xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho
Wararka aan ka heleyno Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in Maanta Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga yeeray Xarunta Xalane ee Magaalada Mudisho halkaas oo saldhig u ah AMISOM iyo Hay’ado kale oo reer galbeed ah.
Xildhibaanno Qoraal rasmi ah u gudbiyay maanta Madaxweynaha Soomaaliya
Xildhibaannada baaramaanka Soomaaliya ee soo saaray dhawaan qoraalkii ay madaxweynaha kaga dalbanayeen inuu xilka ka dago ayaa maanta si rasmi ah ugu gudbiyay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan "2016 doorasho ayaa dalkan ka dhaceyso, lagama noqonayo, barnaamij ayaa socda
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu socdo qorshe ku aadan sidii sanadka 2016 dalka looga hirgelin lahaa doorasho, isagoo cadeeyay inay socdaan dhaqan gelinta qorshahaas.
Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay Xarigii Qunsulka Soomaaliya ee Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horreysay ka hadlay xariggii ay ciidamada booliiska dalka Kenya u geysteen Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya, Siyaad Maxamuud Shire, xarigaas oo mugdi geliyay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxweyne Xasan “UK waxaan uga mahadcelineynaa ahmiyadda ay siinayaan Soomaaliya”+SAWIRRO
Mogadishu, 15 April 2014 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Afrika ee Dowladda UK oo maanta booqasho ku yimid Muqdisho. Madaxweynaha ayaa yiri “UK waxaan uga mahadcelinaynaa ahmiyadda ay siinayaan Somalia.”
Madaxweynaha oo ka qeyb galay kulan loogu duceeyey dadkii ku dhintay sanad ka hor weerarkii xarunta Maxkamadaha dalka
14-kii April sanadkii 2013-kii ayaa waxa Al Shabaab ay weerar ku qaadeen Xarunta Maxkamadaha dalka ay ku shaqeeyaan ee magaalada Muqdisho iyadoona munaasabad loogu baroordiiqayey dadkaasi maanta ay ka dhacday xaruntaasi.
Madaxweyne Xasan: "Waxaan ka digayaa in nidaamka Federaalka loo adeegsado qabiilkii laga gudbay"
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay ka hadlay nidaamka Federaalka ah ee dalka ka hirgelaya waxa uu yahay iyo ujeedada loo sameynayo in maamulada dalka ka jira ay ku dhaqmaan nidaamka Federaalka.
Madaxweynaha J. F. Soomaaliya Mudane Xasan Sh. Maxamuud oo gaaray dalka Burundi “Sawirro”
MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA; “Al-shabaab Cagta ayaan marin doonnaa“
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay cagta marin doono Xarakada Al-shabaab, isagoo xusay in beesha caalamka ay ka gacan-siinayso sidii Al-shabaab ay u soo af-jari lahaayeen.
Madaxweyne Xasan & wafdigii dalka Kuwait uraacay oo Muqdisho kusoo laabtay
Madaxweynaha Dalka Mudane Xasan Shiikh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar ay ugu maqnaayeen maalmo kooban dalka Kuwait.
Madaxweynaha Somalia oo codsi udiray madaxda dalalka Carabta
Madaxweynaha Somalia oo ka qeyb galaya Shirka Madaxda Dalalka Carabta ayaa yiri “Madaxda Carabta waa inay xal u helaan mushkiladaha ka jira dalalka Carabta.”
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka digay si qab qabsi iyo khilaaf curyaamiya howlaha dalka ka socda
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka hadlayay kalfadhigii afaraad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka digay is qab qabsi soo kala dhex gala dowladda, xilli ay soo baxayaan guux iyo hadal heyno la xiriira mooshin ay wadaan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
Madaxweynaha oo xilkii ka qaaday Kuxigeenadii gobolka Banaadir Xubno cusubna magacaabay
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Somaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa xilka uga qaaday kuxigeenadii gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo Xoghayihii maamulkaasi isagoona magacaabay xubno cusub.
Daawo sawiradda: Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ay uganda abaal badan u hayaan shacabka Soomaaliyeed
Maddaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddiga difaaca iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Ugandha oo ay wehliyeen saraakiisha AMISOM, kuwaasoo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho
Madaxweyne Xasan “Howl walbo oo Somalida heyso hakad ka geliso si Al Shabaab loo ciribtiro
Madaxweynaha Somaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey safar uu ku tagey waddanka Turkiga.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay wararkii been abuurka ahaa ee shalay ay warbaahinta qortay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyay warar suuqa la soo geliyay oo sheegayay inuu geeriyooday, isagoo ku eedeeyay kooxo cadaw ah inay wararkan faafiyeen, kuwaasoo doonaya inay qal qal geliyaan dalka iyo siyaasadiisa.
MADAXWEYNAHA OO ARIMO CAAFIMAAD DALKA TURKIGA U AADAY
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa howlo caafimaad wuxuu u aaday dalka Turkiga, shalay gelinkii dambe sida uu xaqiijiyay Afhayeenka Madaxweynaha Eng Yariisoow.
Xassan Shiikh Maxamuud oo sheegay in ay bilaabanayaan Howlgallada AMISOM dhawaan
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud oo ku sugan Addis Ababa ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah kooxda Al-shabaab oo ka talisa deegaanno ku yaalla bartamaha iyo koonfurta Somalia.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya shir madaxeedka Midowga Afrika ee AU
Shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Addis Ababa ee Caasimada Itoobiya, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qeyb gali doono shirkan, kadib markii uu xalay gaaray magaalada Addis Ababa.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka hadlya markii ugu horreysay ku biirista ciidamada Itoobiya ay ku biireen howgalka AMISOM, isagoo sheegay inay tahay arrin uu soo dhaweynayo.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xirnaashaha waddooyinka Muqdisho qaarkood, isagoo ku tilmaamay xrinaashahan kuwo lagu bad-baadinayo nolosha shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibta dalka ku sugan.
MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA OO KA HADLAY ARRIMO MUHIIM AH+DHAGEYSO
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 21, 2014
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xalay ka qeyb galay barnaamijka dood Wadaag oo ka baxay Telefeshinka universal Xaruntiisa Muqdisho ayaa ka hadlay arimo badan ka dib su’aalo furan oo bulshada goobta ku sugneyd ay weydiiyeen Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamud ayaa aqbalay wasiirada cusub ee uu xalay magacaabay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed, isagoo xusay inay wasiirrada cusub yihiin kuwo khibrad iyo waayo-aragnimo leh.
Madaxweynaha Somalia ayaa ku dhiiri geliyey shacabka inay Waraaqaha Aqoonsiga sameystaan
Sagal Radio Services • News Feature • December 22, 2013
Muqdisho, 22 December 2013 - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafladii Daah-Furka Baasaboorada cusub iyo waraaqaha aqoonsiga ka qeybgalay, isla markaasna ku dhiiri geliyey shacabka inay Waraaqaha Aqoonsiga sameystaan.
Daawo sawiradda:Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Kuxigeenka Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xiriirka Mareykanka uu yahay mid xoogan, isagoo ka mahadceliyey booqashada ay Kuxigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Linda Thomas-Greenfield ay maanta ku timid Muqdisho.
Madaxweynaha Somalia oo ka baaqday safar uu ku iman lahaa Nairobi sababo la xiriira Magacaabista Ra’iisul Wasaaraha
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheikh Maxamuud ayaa ka baaqday booqasho uu ku imaan lahaa magaada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo magacaabayo Ra'iisul Wasaare
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo magacaabayo Ra'iisul Wasaare cusub, kadib markii shalay Baarlamaanka Soomaaliya uu kalsoonida kala laabtay Xukuumadii Ra'iisul Wasaare Saacid.
Soomaaliya oo dib u soo nooleysay xiriirki kala dhaxeeyey Nigeria‏ (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Maxamud ayaa maanta Xarunta Villa Somaaliya ku qaabilay Safiirka Dowladda Nigeria Mudane Akin Oyateru.
Madaxweynaha oo ka hadlay maalinta macallinka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta macallimiinta Soomaaliyeed ku ammaanay inay door geesinnimo leh ka soo qaateen sidii uu dalka uga dhici lahaa isbeddel dhanka nabadda ah oo looga soo kabanayo colaadihii dhacay.
Xassan Shiikh oo sheegay in ay Dowlada saxiixeyso hishiis wax u taraya Caruurka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta kormeer shaqo ku tagey Iskuulka Xamar Jab-Jab oo uu sheegey in Soomaaliya ay saxiixi doonto Heshiiska Caalamiga ee Xaquuqda Carruurta, iyadoo maanta ay ku beegantahay maalinta Caalamiga ah ee Xaquuqda Carruurta Adduunka oo aheyd 20kii November 1989kii markii Qaramada Midoobey ay u aqoonsatay maalinta Xaquuqda Carruurta Adduunka. Soomaaliya, South Sudan iyo Mareykanka ayaan weli saxiixin heshiiskaas Caalamiga ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay arrimo kala duwan
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id uu ku qabtay Xarunta Madaxtooyada kaga hadlay colaadaha iyo fatahaadaha Gobolka Shabellaha Dhexe iyo duufaantii xeebaha bari ee Puntland.
HALKAAN KA DHAGEYSO HADALKA MADAXWEYNAHA
Madaxweynaha Soomaaliya oo Soo Dhaweeyay Horumarka Laga Gaaray Qorshaha Maamul u Sameynta Gobolka Hiiraan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa ku soo dhaweynayo qorshaha dhismaha maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa si kulul u cambaareeyey Labo qarax oo xalay ka dhacay Hotelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, kaasoo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac.
MADAXWEYNAHA SOOMALIA: “Waxaan Rabnaa Nabad iyo Maamul Wanaag ka hirgala Dhammaan Gobollada Somalia”
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud oo xalay casho sharaf ugu sameeyay xarunta madaxtooyada ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta Jubbooyinka ayaa sheegay in hadafkooda uu yahay inay nabad iyo maamul wanaag ka hirgasho dhammaan gobollada Soomaaliya.
Daawo sawirro) Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo Muqdisho ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya
Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdi Faarax Shir-doon (Saacid) ayaa galabta si gooni-gooni ah ugu qaabilay Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, Tedros Adhanom iyo wafdi uu horkacayo, iyagoo kala hadlay arrimaha horumarinta xariirka labada dowladood iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika.
xuska Jamhuuriyadda Turkey iyo daah furka Mashruuca Marmaray (Sawirro)
Hoggaamiyaal uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaliya Xasan Skeekh Maxamuud ayaa maanta ka qeybgalay xaflad weyn oo iskugu jirtay xuska Jamhuuriyadda Turkey oo 90-sano jirsatay iyo daah furka wadada tareenkii ugu horeeyay ee badda hoosteeda mara, isla markaana isku xira labada qaaradood ee Yurub iyo Asia.
Madaxweynaha oo Qaabilay Xubnaha Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika:-(War-saxaafadeed)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay xubnaha Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika isla markaana kula dar-daarmay in Ciidamada Soomaaliya loo helo tasiilaadkii iyo dhaqaalihii ay u baahnaayeen.
Madaxweyne Xasan “Waa in sharciga la horkeeno cidii isku daydey inay disho wariye Timocadde
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa si kulul u cambaareeyey falkii isku dayga dilka ee loo geystay Wariye Maxamed Maxamud Timacadde oo u shaqeynayey Universal TV, isla markaana hay’adaha amniga ku amray in sharciga la horkeeno cidii isku dayga dil u geystay Timacadde oo haatan isbitaal ugu jira dhaawacii ka soo gaaray falkaas arxan la’aanta ah.
MADAXWEYNE XASAN SHEEKH: “Qaraxii Baladweyne waa mid lagu diiddan yahay horumarka uu dalku ku Tallaabsaday”
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku tilmaamay mid lagu diidan yahay horumarka lagu tallaabsaday.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi uu siiyay wargeys wabaahinta caalamka qaarkeed ku sheegay ay ciidamada Mareykanku ku qaadeen toddobaad ka hor degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo wargeliyay.
Madaxweynaha oo maanta ka qeyb galaya shir madaxeedka aan caadiga aheyn ee Midowga Afrika oo looga hadlaayo arima la xiriira Maxkamada danbiyada dagaalka ee Heeg
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah ka qeyb galaya shir madaxeedka Midowga Afrika ee maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Xassan Shiikh Maxamuud oo umada Soomaaliyeed ugu hanbal yeeyay Sanad guuradii 59 ee ka soo wareegatay xiligii calanka Soomaaliya laga taagay meel kamid ah Dalka
Maanta oo kale 12-October sanadkii 1954 waa maalintii u horeysay ee dhul Soomaaliyeed laga taago Calanka Buluuga ah ee dhexda shanta xidig ku leh, iyadoo ka soo wareegatay 59-sano ah.